Maybelline fit me အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
မင်္ဂလာပါ Beautiful sisတို့ရေ
Maybelline Fit meရဲ့ Foundationလေးကတော့အဆီပြန်သောအသားအရေနှင့် အသားခြောက်သောသူများအတွက်နှင့်Powderလေးကတော့ အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါတယ်ရှင့်
♦️သူက foundation liquid type ဖြစ်ပေမဲ့ normal to oliy skin type တွေအတွက် ထုတ်ထားတော့ သုံးရတာ အတော် အဆင်ပြေပါတယ်.
♦️Long lasting ဖြစ်တဲ့အပြင် ကိုယ့်အသားအရောင်နဲ့ ညက်သွားပီး တထပ်တည်း ဖြစ်သလို ဖြစ်နေစေမှာပါ.
♦️ဒါထက်ပိုကောင်းတာက မျက်နှာပေါ်က ချွေးပေါက်လေးတွေ အနာအဆာလေးတွေကို မသိမသာလေး ဖုံးဖိပေးနိုင်ပါသေးတယ်!
USA မှတိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်းသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့လက်လီလက်ကားအားပေးနိုင်ပါပီရှင့်
Maybelline Fit me foundation-13500ks
Maybelline Fit me Powder-11500ks
အမည်: Maybelline fit me